आज २०७६ कार्तिक १७ गते आइतबारको राशिफल - Lekbesi Khabar
आज २०७६ कार्तिक १७ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७६ कार्तिक १७ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
१७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०६:४१ November 3, 2019
फौजी किराले धानबाली सखाप पारेपछि बाँकेका किसानको विचल्ली
छठ पर्वः उदाउँदो सूर्यको उपासना गरिँदै